Imidlalo yokuziqhelanisa ehlotyeni - Eyona nto ingcono ukuba ithathelwe ingqalelo | Bezzia
Eyona midlalo ilungileyo ukuziqhelanisa ehlotyeni
USusana godoy | 14/06/2022 16:00 | Ukuzivocavoca
Imidlalo yokuziqhelanisa ehlotyeni inokuba yeyona ihlukeneyo. Ngenxa yokuba sibulela ukufika kwemozulu entle, sinokuphuma siyonwabele umoya omtsha ukuze sithathwe yintshukumo encinane. Kuyinyani ukuba kufuneka silibale malunga neentsuku ezishushu kakhulu kunye neeyure eziphambili zosuku, ukuphepha yonke imisebenzi yolu hlobo.
Kodwa ukuba kungekudala iiholide ziya kuba ngabalinganiswa bobomi bakho, unokuhlala unento encinci kuyo yonke into. Ngakolunye uhlangothi ukuphumla okufanelekileyo, kodwa kwelinye kumnandi ngendlela yoqeqesho. Ngale ndlela, umzimba wakho uya kuqhubeka usebenza, kwaye okona kubaluleke kakhulu, usempilweni njengakunyaka wonke. Masiqalise!
1 Ukuqubha ngomnye wemidlalo engcono ukuziqhelanisa ehlotyeni
5 ukubheqa kwi-surfing
Ukuqubha ngomnye wemidlalo engcono ukuziqhelanisa ehlotyeni
Liyinene elokuba ukuqubha kunokwenziwa unyaka wonke. Ukuya echibini ebusika kukwayindlela ebalaseleyo. Kodwa ngokusengqiqweni xa kufika ixesha lasehlotyeni, kubonakala ngathi inkuthazo iyasithatha. Lixesha lokuba sizivumele ukuba sithathwe ngomnye wemidlalo egqibeleleyo. Ngokwenene lolona khetho lubalaseleyo kwaye kuyo yonke iminyaka okanye iimeko. Nakubantu abanengxaki yomqolo okanye abakhulelweyo. Phakathi kweenzuzo zokuqubha sinokuthi kuphucula ukuguquguquka kodwa kunye namandla kunye nokunyamezela. Ngexesha elifanayo sishiya ngasemva isixa esihle seekhalori.
Nangona ebusika sinokwenza indlela engaqhelekanga, akukho nto injengokonwabela ukuhamba xa imozulu ingcono kakhulu. Ukwenza oku, kufuneka sikhethe iintsuku ezingekho shushu kakhulu. Ukusukela ngoko kuphela siya kulonwabela uhambo kunye nembonakalo yomhlaba ngakumbi. Ukuhamba yenye yemithambo ekhuthazwayo nokuba sikweliphi na ixesha lonyaka. Ukongeza ekubeni luncedo kumzimba, kukwaluncedo nasengqondweni, kuba iyakusiphumza kwaye ikhulule lonke uxinzelelo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, ngumdlalo weenkwenkwezi wehlobo. Kuba unokuthatha ithuba lemozulu entle kunye nolwandle ukuze uzame. Ngokuqinisekileyo kufuphi nalapho uhlala khona okanye apho uchitha khona ihlobo kuya kubakho iiklasi zalo mdlalo. Bobabini abantu abadala kunye nabantwana baya kuba neeklasi ezilungelelaniswe kwinqanaba labo kwaye kancinci kancinci uya kuba nakho ukonwabela i-adrenaline eshiya thina. Uyazi ukuba ngenxa yoko unokuthomalalisa umzimba wakho kwaye womeleze izihlunu zakho. Ngaphandle kokulibala ukuba yindlela egqibeleleyo yokuphelisa uxinzelelo.
Akukho lula, kufuneka uvume. Kodwa i-kitesurfing yenye yezinye iindlela zokukwazi ukuba sebhodini kwaye kunjalo, emanzini. Kodwa ukongeza kwibhodi echaziweyo kuya kufuneka uqhube ikayiti, ke ibhalansi kunye ne-reflexes zingundoqo ekuziqhelaniseni lo mdlalo. Akukhathazi nokuba sibhalise kwikhosi yokufunda iziseko, kunye namaqhinga agqwesileyo. Siyakuqinisekisa ukuba ukuziqhelanisa okunje kuya kwenza i-adrenaline yakho idubule, wenze umsebenzi omkhulu we-aerobic.
Ukuthatha ithuba lolwandle kunye nemozulu entle, siqhubeka sithetha ngamabhodi emanzini. Kule meko, sinePaddle surfing, enye yezona ndlela zibalaseleyo zokhetho lolona hlobo lwezemidlalo lungcono ukuziqhelanisa kweli hlobo. Kuya kufuneka ugcine ibhalansi yakho ebhodini kwaye uzincede nge-paddle ukuya phambili. Ewe, kubonakala kulula kodwa akusoloko kunjalo. Enkosi kwimithambo efana nale, uya kukwazi ukusebenza amaqela ahlukeneyo emisipha yomzimba wonke. Nangona ezona ziphambili ziya kuba ngamawele okanye iimpundu, kodwa ngaphandle kokulibala ukuba isisu okanye i-pectoral kunye ne-biceps nazo ziya kudlala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » ZeMpilo » Ukuzivocavoca » Eyona midlalo ilungileyo ukuziqhelanisa ehlotyeni
Ukungathembeki njengempindezelo kwisibini
Uthotho oluphezulu lweNetflix: 'Umama ogqibeleleyo'